छिटो सहमति गरेर डा. केसीको अनशन तोडाउने प्रयास - Jyotinews
छिटो सहमति गरेर डा. केसीको अनशन तोडाउने प्रयास
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज २३ गते १४:४०
२३ असोज, काठमाडौँ । सरकारले बुधबार गठन गरेको वार्ता टोली र अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल सकेसम्म छिटो सहमति गरेर अनशन तोडाउने प्रयासमा जुटेका छन् । प्रा डा केसीको मागका विषयमा सहमति जुटाउन दुवै वार्ता टोलीबीच बिहीबार बिहान १०ः३० बजेदेखि वार्ता भएको थियो । दिनभरजसो नै दुई टोलीबीच प्रा डा केसीका मागका विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो ।